१३ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्ने « Janaboli
१३ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्ने
काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गरेको छ । सरकारले १३ दिन थप बिदा दिने प्रस्ताव गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई रहेको बिदा पुनरावलोकन समितिले विभिन्न ८ पर्वका लागि १३ दिन सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको हो।
२०७५ सालमा घोषणा भएका सार्वजनिक बिदाहरु यथावत राख्दै सरकारले थप पर्वमा बिदा दिन लागेको हो। कतिपय जातीय पर्वहरुमा सम्बन्धित जातिको घनत्व रहेका प्रदेशमा मात्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बिदा घोषणा गरेका थिए। सरकारले पर्वहरुको बिदा काटेको भनी आलोचना भईरहेको समयमा यस्तो निर्णय भएको हो।
आगामी वर्षदेखि किराँत समुदायको चाड उभौली र उधौलीमा बैशाख तथा मंसिर पूर्णिमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघको मागबमोजिम ती बिदा प्रस्ताव गरिएको हो। राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलगायत मुस्लिम संस्थाहरुको माग बमोजिम इदुल फित्र,बकरइद र मोहम्मद जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै क्रिश्चिनय महासंघको माग तथा बिदा पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै डिसेम्बर २५ मा क्रिसमसको दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। अर्को वर्षदेखि गुरुङले मनाउने तमु ल्होसार, तामाङको सोनाम ल्होसार र शेर्पाको ग्याल्वो ल्होसारमा पनि सार्वजनिक बिदा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै छठ पर्वमा पनि विदा प्रस्ताव गरिएको छ।
यो कस्तो भाग्य ? लाउलाउ खाउखाउ भन्ने उमेरमै डाक्टर सुशीलाले संसार छोडिन् !
काठमाडौं । गरिब दुःखी जनताको उपचार गर्दै आएकी २८ वर्षीया एक डाक्टरको निधन भएको छ